Boosaaso oo laga roob doonnay iyo culimo ka hadashay isu-soobaxa. – Radio Daljir
Boosaaso oo laga roob doonnay iyo culimo ka hadashay isu-soobaxa.
Boosaaso, feb 17 – Salaad roob-doon ah oo Eebbe barwaaqo looga baryayay ayaa maanta qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Boosaaso oo ay horkacayeen culimaa?udiinka magaaladu ay ku oogeen fagaare wayn oo u dhow xabsiga dhexe ee Boosaaso.
Salaaddan roob-doonta ahayd oo ay oogeen boqollaal dadweynaha magaalada ah ayaa kaddib ay culimaa?udiinka magaalada ee fagaarahaas salaadda shacabka kula tukaday ay Ilaah uga baryeen in uu ugu naxariisto roob looga boxo abaaraha saameeyey guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya, taasoo si gaar ah looga dareemey degaannada gobolka Bari.
Sidoo kale culimaa?udiinka dadka fagaarahaas kula hadlay, baryo dheerayd oo ay Alle badhaadhe ay kaga waydiisteen kaddib waxa ay dadka fareen in ay isa saamaxaan isla markaana dhiigga la daadinayo iyo colaadaha ka taagan badiyaa Soomaaliya ay sabab diini ah u yihiin abaaraha iyo dhibaatooyinka guud ahaan dalka ka aloosan.
Sheekh Daahir aw Cabdi oo ka mid ahaa culimada shacabka Boosaaso kula hadlay oogidda salaadda roob-doonta ah ayaa si gaar ah uga hadlay colaadda ka oogan gobollo ka mid ah Soomaaliya, waxa kale oo uu sheekhu farriin u diray dhammaan inta ku lugta leh dilalka iyo dagaallada Soomaaliya ka taagan.
Oogidda salaaddan roob-doonta ah ee lagu tukaday Boosaaso ayaa ku beegan xilli abaaro laxaad leh ay ka taagan yihiin badiyaa gayiga Soomaaliya, sidoo kalena dhawaan qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee dalka laga oogay salaad tan oo kale ah oo roob-doon ah.